Music Style - Myanmar Gospel Songs
Category: Music Style
Verse: ကိုယ်တော့်အထဲ၌ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိ တော့ဘူးလေ ခွန်အားအစွမ်းအစတွေ လျှံထွက်နေ ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝ ယေရှုအရှင် အရာ အားလုံးဖြစ်ရန် တတ်စွမ်းတယ် CHO :ဘာမှထပ်မလိုတော့ပါ ဘာမှထပ်မလိုတော့ပါ ယေရှုရှိရင် ပြည့်စုံတယ် ဘာမှထပ်မလိုတော့ပါ ဘာမှထပ်မလိုတော့ပါ ယေရှုရှိရင် ဖြစ်နိုင်တယ် အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်
Verse 1: ဆာငတ်‌နေ‌သော ကျွန်ုပ်နှလုုံးသား တို.ထိမှုပါ ‌ မျှော်လင့်နေ‌သော ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်် ‌ရောင့်ရဲ‌စေပါ ကိုယ်‌တော်ကို ကျွန်ုပ်ကြိုးစား၍‌ဖွေရှာ ခေါ်ဆောင်ပါ ကိုယ်‌တော်ရဲ.မျက်‌မှောက်ဝယ် Cho: ခန္ဒာ စိတ် ဝိညာဉ်် ကိုယ်‌တော်ကို ‌‌မျှော်လင့်လို.‌နေတယ် ရေမရှိ ‌သွေ.‌ခြောက်လွင်ပြင်မှာ ခန္ဒာစိတ် ဝိညာဉ်် ကိုယ်‌တော်ကို တမ်းတလို.‌နေတယ် ကိုယ်‌တော်သာ ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ. လိုအင်ပါ Verse 2: ငို‌ကြွေးနေသော ကျွန်ုပ်နှလုံးသား ‌အောက်‌မေ့မှုပါ ‌...
V. အထံတော်သို့တိုးဝင်လာ အမြင်ချင်ဆုံးသခင့်မျက်နှာ ဦးစွာတွေ့မြင်ဖို့ ကျွနု်ပ်စိတ်ဆန္ဒ အစုံလင်ဆုံးသခင့်အထံမှာ တစ်စုံတစ်ရာမှမရခဲ့ရင် ပြင်းပြသော ကျွနု်ပ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒ ဖြင့် Pre. တိုးဝင်လာ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း အကျွနု်ပ်၌ပြုမူပါ Ch. ကျွနု်ပ်အတွက် ကိုယ်တော်သည် အသင့်ရှိနေ အနားနားအမြဲတမ်း အဆင်သင့် ရှိ နေတာ ဘယ်အရာကို အားကိုးနေဦးမလဲ ကျွနု်ပ်ရဲ့တောင်းလျောက်သံနားညောင်းကာ နက်နဲသောအရာတွေကို ဖွင့်ပြပေးနေ အရာရာပြည့်စုံနေ ထိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာ Bge. အရာရာပြည့်စုံသောနေရာ အပြည့်စုံဆုံးနေရာ...
Verse: 1 နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့မေတ္တာ နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့ဂရုဏာ နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော် ပိုလျှံနေတယ် Verse:2နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့သစ္စာ နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့ဂတိတော် နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေ ပိုလျှံနေတယ် Pre chorus ပင်လယ်လှိုင်းလုံးများကိုရပ်တန်သွားစေသူ ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတယ် Chorus ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူး ဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ဘူး လက်တော်နဲ့အမြဲတမ်းပို့ဆောင်တယ် ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူး ဘယ်တော့မှမစွန့်ခဲ့ဘူး ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ဘူး နေ့ရက်တိုင်း
verse: သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် လှုပ်ရှားသည့်အခါ ချည်နှောင်နေတဲ့ တံတိုင်းကြီးများ ပွင့်သွား ၀ိညာဉ် မျက်စိပွင့် ၀ိညာဉ် နားတွေကြား နိမိတ်လက္ခဏာ ကြီးမားစွာ ထင်ရှား ဖူလှုံပေါများခြင်း ကြွယ်ဝခြင်းများ မကြုံစဖူး အံ့ဖွယ်တန်ခိုးများ PRE – CHORUS ၀ိညာဉ်နိုးထခြင်း တိုင်းနိုင်ငံထဲ၌ ယခု သက်ရောက်ပြီ ယုံကြည် ဝန်ခံ မြွတ်ဆို CHORUS ကြီးမားသော နိုးထမှုမြစ် စီးဆင်းလာပြီ ထူးဆန်းသော အတွေ့အကြုံများ...
” နာမတော် ချီးမွမ်း “
V:1 နာမတော်ချီးမွမ်း ပြည်တော်မှာ လုံလောက်ချိန်ချီးမွမ်း ရေမြေတွေ လျှံထွက်ချိန်ချီးမွမ်း အမြဲတမ်းချီးမွမ်းမည် V:2 နာမတော်ချီးမွမ်း ခြောက်သွေ့ရပ် ကြုံတွေ့ချိန်ချီးမွမ်း ကန္တာရ လျှောက်လှမ်းချိန်ချီးမွမ်း အမြဲတမ်းချီးမွမ်းမည် PRE: ရရှိကောင်းကြီး ပြန်လည်ပူဇော် ချီးမွမ်းခြင်းယဇ် ဒုက္ခမိုးတိမ် ကြုံဆုံနေလည်း ချီးမွမ်းနေမည် CHO: ချီးမွမ်းအသက်ရှင်မည် ကိုယ်တော်၌ ချီးမွမ်းအသက်ရှင်မည် ချီးမွမ်းအသက်ရှင်မည် ကိုယ်တော်၌ သန့်ရှင်းသောနာမတော် / မအား ဘုန်းကြီးစေ ( SOLO: )...
Verse: 1 ယေရှု ကျွန်ုပ်ကို ချစ်သည်မှာ ဝိညာဥ်အပြစ်မှ လွတ်ခြင်းငှာ တိုင်ပေါ်တွင်ခံ သွေးတော်သွန်းရာ နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆိုမမှီ CHO: ကိုယ်တော်ရှင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆို မမှီနိုင်ရာ ယေရှုကျွန်ုပ်အား ချစ်သည်ကို နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆိုမမှီ​ Verse:2ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်စေလိုငှာ ဝမ်းနည်းဒုက္ခခံပါတကား ဆူးရစ်ခေါင်းတော်ြမတ်ပေါ်တင်ရာ နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆိုမမှီ Verse:3ပလ္လင်တော်ဝယ် ရှေ့ဆောင်သခင် ကိုယ်တော်မြတ်၌ ငြိမ်သက်သာခြင်း အသွေးတော်မြတ် ကုသိုလ်တော်ပင် နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆိုမမှီ Verse:...
Verse 1: (နှလုံးခုန်လိုက်တိုင်း ကျေးဇူးတော် အသက်ရှုလိုက်တိုင်း ချီးမွမ်းမကုန် ခြေလှမ်းတိုင်း ကြည့်ရှုနေတယ် အထိအခိုက်မရှိစေဘူး) Verse 2: (မှောင်မိုက်သန်းခေါင်ယံည အိပ်စက်ချိန် ကောင်းကင်တမန်များ တပ်ချပေး မနက်မိုးလင်းတိုင်းမှာ နိုးထခွင့်ပေး) Chorus: (နှလုံးခုန်လိုက်တိုင်းမှာ အသက်ရှုလိုက်တိုင်းမှာ သခင့်ကျေးဇူး ဂရုဏာတော် ချီးမွမ်းလို့ မကုန်ဘူး ကျန်းမာခွင့်ပေးတယ် အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ် သခင့်ကျေးဇူးရေတွက် ချီးမွမ်းမကုန်ဘူး) Bridge: (မနက်ခင်းအလင်းတန်းလေးနဲ့ သခင့်ဂရုဏာတော် ကြိုလင့်နေ ဘယ်အရာနဲ့မှ ကျွန်ုပ်အတွက်...